Uhlaka lwesipikha se-IKEA SYMFONISK, umsindo ongcono nokwakhiwa okuningi | Izindaba zegajethi
Uhlaka lwesipikha se-IKEA SYMFONISK, umsindo ongcono nokwakhiwa okuningi [Buyekeza]
UMiguel Hernandez | 04/08/2021 15:00 | General, Izibuyekezo
IKEA, Njengoba kungenzeka wazi kahle ngoba silethe lapha ukuhlaziywa okuthile kwalolu hlobo lwedivayisi, ibisebenza isikhathi eside njengeSonos, inkampani yaseNyakatho Melika egxile kumsindo ohlakaniphile nongenantambo. Ngale ndlela, abaseSweden nabaseMelika benze umkhiqizo omusha ohlanganisa okungcono kakhulu kwe-IKEA nobuchwepheshe obuhle kakhulu. premium de I-Sonos.
Sihlaziye ifreyimu yesipikha seSYMFONISK kusuka ku-IKEA ngokusebenzisana kwayo neSonos, ukweqa okukhulu ngekhwalithi yomsindo namandla, uphawu lwendlu. Thola nathi ukuhlaziywa okujulile kwale divayisi okuthwebula ukubukeka okuningi.
Cishe cishe njalo, sihambisana nalokhu kuhlaziywa okujulile nevidiyo evela esiteshini sethu se YouTube, kuyo uzokwazi ukwazisa kuqala i-unboxing ephelele kanye nenqubo yokumisa, okuhlala kwenzeka kumadivayisi weSonos kulula. Thatha ithuba lokubhalisa futhi usishiyele umbono wakho futhi ubhalise, kulapho kuphela lapho singaqhubeka sikulethela okuqukethwe okuhle kakhulu ku-Actualidad Gadget.
1 Izinto zokwakha: I-IKEA engaphezulu kuneSonos
2 Umsindo: Ama-Sonos amaningi kune-IKEA
3 Ukuxhumana nokuphathwa kokusetshenziswa
4 Okuhlangenwe nakho nombono woMhleli
Izinto zokwakha: I-IKEA engaphezulu kuneSonos
Ukubheka kokuqala kokungabikho ebhokisini futhi siyabona ukuthi i-IKEA idizayine isikhwama cishe ngokukhethekile sale divayisi, akumangalisi ukuthi ibhokisi laso likhulu. Ngaphandle kwalokho esingakulindela, okungenani emaphaketheni kukhombisa ukuthi uSonos wenze into yakhe futhi isipiliyoni sifana naleyo eminye imikhiqizo yayo. Uma sesingaphandle sesivele sinesipikha ezandleni zethu esisimangaza ngobuncane baso nosayizi waso osebenzayo: 41 x 57 x 6 centimeters. Ikhebula liphana futhi liyabongwa, amamitha ayi-3,5 esewonke ukuze singabi nezinkinga zokuxhuma, ngaphezu kwalokho, lenziwe ngenayiloni eboshiwe.
Ngokusobala futhi inzima ngandlela thile, futhi Kufakwa ibhokisi elinezesekeli ezahlukahlukene ukuze sikwazi ukulibeka, ngonyawo lwe-silicone, isibambo senayiloni noma ngqo singalubeka odongeni kube sengathi umdwebo. Singayithenga ngezinhlobo ezimbili, enye imhlophe / mpunga kanti enye imnyama / mpunga, yomabili inokwakheka okufanayo ngokuya ngephaneli langaphambili, kepha ngemibala ihlehlisiwe. Ngokuqondene nokulengiswa odongeni, kufanele siqinisekise ukuzinza kwayo, ngoba amandla omsindo anjengokuthi mhlawumbe singathandwa.
Sigxila kumapaneli, futhi lokhu kuyathakazelisa impela. Ngokusebenzisa okunye okwenziwe ngemuva singacindezela ukukhipha indwangu futhi sifinyelele ngqo kuzipikha zale SYMFONISK. Okwamanje, i-IKEA isinikeza ukuthi kungenzeka finyelela kumiklamo ehlukene eyishumi nambili kuwebhusayithi yabo futhi ngokusebenzisa ezitolo zalo ezibonakalayo ngamanani azohluka phakathi kwama-euro angama-16 wezinguqulo ezishibhile nama-euro angama-35 abiza wonke amanye. Imiklamo yazo zonke izinhlobo nokuthanda izinto, uyazi, imibala. Ukukushintsha, njengoba ubonile, kulula kakhulu futhi kungenye yamaphuzu ayo athakazelisa kakhulu.
Umsindo: Ama-Sonos amaningi kune-IKEA
Uma imikhiqizo yokuqala yokubambisana kweSonos ne-IKEA isivele ishiye ukunambitheka okuhle emilonyeni yethu, lokhu kudlulile ebesikulindele. Ngeshwa asikwazanga ukufinyelela kuzimpawu zobuchwepheshe, noma kunjalo, lapho sibona ubukhulu baso obuphansi besaba okubi kakhulu. Ukwesaba kwethu kuphelile futhi uSonos uphinde wathola ukuthi imilingo ingenziwa. Idivayisi ayidlidlizi ngemisindo ephansi, umsindo uyaguquguquka, nevolumu iphezulu ngokumangazayo.
Ukuze ukwazi ukuthola umbono ezingeni lokuqhathanisa, sithola umphumela onamandla athe xaxa kuneSonos One yendabuko. Ngaphandle kokuhleleka kwayo, ayidlidlizi udonga noma inikeze umsindo ophukile. Futhi, isekela umthetho olandelwayo we-Sonos 'Trueplay smart audio.
Ukuxhumana nokuphathwa kokusetshenziswa
Kubalulekile ukuthi ulande uhlelo lweSonos, itholakalela bobabili iOS ngokuqondene Android ngokuphelele mahhala. Lapha uzokwazi ukumisa ngokushesha idivayisi yakho:
Ixhume emandleni bese ulinda i-LED ukuthi icwayize okuluhlaza okotshani
Vula uhlelo lokusebenza lwe-Sonos bese wamukela izicelo zemvume
Khetha idivayisi yakho ye-Sonos SYMFONISK bese wamukela ukuhlonza
I-SYMFONISK izokhala futhi uhlelo lokusebenza luzoyixhumanisa
Manje kufanele ulinde isibuyekezo
Manje usungavumelanisa izinsizakalo zakho zomsindo futhi udlale konke okuqukethwe kwakho
Kwelinye lama-bezels sinokufinyelela kuzinkinobho ezintathu, eyokudlala / Misa isikhashana ukuthi ngokuthepha kabili izodlulela phambili ingoma futhi ngokuthepha kathathu izobuyela emuva, kanye nezinkinobho zokuphatha ivolumu. Okwalabo abane-WiFi empofu (sikufundisa ukuyixazulula kalulaFuthi inembobo yenethiwekhi ye-Ethernet RJ45.
Kulo lonke uphenyo esibhekene nalo iSonos enomthetho wonke, ukutholakala Spotify Xhuma, multiroom kanye nenqwaba yezinsizakalo zokusakaza zomsindo ukuze uzijabulele. Ngendlela efanayo, iyatholakala ngephrothokholi ye-Apple HomeKit's AirPlay 2 futhi-ke, ngosakazi be-IKEA bezinhlelo zasekhaya ezixhunyiwe. Asinaye lowo yebo, ngemakrofoni evumela ukuxhumana ne-Alexa, iGoogle Home noma iSiri, okuthile obekuzokwenza lo mkhiqizo oyindilinga ngempela.
Okuhlangenwe nakho nombono woMhleli
Le SYMFONISK evela ku-IKEA naseSonos ingimangazile ngokweqiniso. Yize kungashibhile, kungama-euro angama-199, inikeza umsindo ofanele umkhiqizo olinganayo futhi obiza kakhulu we-Sonos. Lokhu kusho ukuthi ukubekwa kahle kungaba ngumlingani ofanele ehhovisi, ekamelweni lokulala ngisho nasekamelweni lokuphumula, ngoba kungasetshenziswa kumodi "yestiriyo".
Umsindo muhle kakhulu, ngaphezu kokulindelwe komkhiqizo we-IKEA, uthuthukisa ibanga uma kungenzeka ISIMBONI kufinyelele lapho besingalindele khona. Ithuba lokushintsha amapaneli ahlukahlukene lisimema ukuthi sakhe isitayela sethu futhi siyivumelanise nezidingo zethu, uma othile engenza into efana naleyo, kwakuyi-IKEA yaseSweden leyo. Kungumkhiqizo engiwutusa ngobuqotho ngaphambi kwaleyo mibhoshongo yomsindo eyisicefe ehambisana namakamelo entsha yethu, ihlanganiswe kahle kakhulu futhi inikela ngezimpawu ngokwenani. Sinikeze le IKEA SYMFONISK ithuba futhi sesiphindisele.
Kuthunyelwe ku: 4 Agasti 2021
Ukulungiswa kokugcina: 3 Agasti 2021
Izinto ezihlanganiswe kahle nedizayini, uhlobo lwendlu
Umsindo omangaza ngamandla nokuguquguquka
Intengo ishintshelwe kakhulu ohlotsheni lwedivayisi
Awekho amamakrofoni e-Alexa
Ayikho ikhebuli ye-RJ45
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Uhlaka lwesipikha se-IKEA SYMFONISK, umsindo ongcono nokwakhiwa okuningi [Buyekeza]